Masiko kunye imicimbi yayo kwi-Mexico
Mexico zinokuphathwa kwaye Sunny emzantsi Afrika i-american eli lizwe kunye i kakhulu cheerful kwaye sociable abantu kunye nomdla cult ka-usapho. Mexicans ingaba uhlobo, cheerful, uthando ukuthetha kwaye umamele guquguqula. Ngabo hospitable ukuba foreigners, nangona wary lomthetho i-american isimbo unxibelelwano kunye Spaniards. Ardent patriots, mna bathanda iiholide kwaye ilungelelanise kwabo ngomhla ezahlukeneyo ezithile. Ezilungileyo unxibelelwano ngu evident ubuncinane ukuba abemi Mexico kusetyenziswa ukuba akhaphe phantse nasiphi na incoko kunye omkhulu ncuma. Kanjalo kuya kufuneka (ingakumbi yephondo iindawo) greet wonke umntu, nkqu bolunye uhlanga, umzekelo, kokuya kwi ezothutho. Kwi-Mexico pi inkululeko intetho. Kwaye abahlali zithungelana ngamnye kunye nezinye ethile ngaphandle kwezixhobo zokusebenza. Nangona kunjalo, kunye bolunye uhlanga okanye makhaya Mexicans ingaba kakhulu polite kwaye landela yonke imithetho etiquette.
Kubalulekile babekholelwa ukuba iingubo kufuneka tidy, enew kwaye ucocekile. Ngalo mcimbi iintlanganiso kubalulekile nomthetho ukuba wear a tie. Ingaba prohibited okanye singaphumelelanga kwesisu. Ngoko ke, abaninzi usapho ezintathu okanye ngaphezulu abantwana inqaku lencwadi. Abantwana get ezikhethekileyo unyango jikelele apha, baya pamper kwaye vumela kakhulu. Ukongeza, Emexico kukho cult ka-motherhood, umama yi ezinyulu ingcamango kuba Mexican. Celebrated umama ke ngomhla we-meyi ishumi. Jikelele, Mexican abafazi asingawo no umntu isimo. Ngoko ke, ushishino kukho ezimbalwa abafazi, nangona kukho tendency ukwandisa impembelelo yabo. Intloko usapho kanjalo ufumana umntu. Kwintetho yakhe kubasindisa ixesha, Mexicans yiya amaxwebhu, drive abantwana babo ukuba circus, okanye benze i-Golf, name, horse riding, hunting, diving, njalo-njalo. Exciting nightlife kuphela famous kuba tourist centers. Ukuba brag malunga zabo imathiriyali ubutyebi inje hayi wavuma, kodwa Mexicans kufuneka ibe expensive. Emicimbini abantu Mexico appreciate punctuality, kodwa”ndibhala le leta”unxibelelwano ngu olukhulu ukubaluleka. Xa iyonke inani abahlali Mexico ngu malunga, million. Njengoko kuba bale mihla zilandelayo: ukwakhiwa, iqulathe mhlophe inzala immigrants ukusuka Europe (malunga ezintlanu), mestizos, abo bazibiza”Mexicans,”Indians, ngokunjalo abameli ababini baka-amanye amaqela (Asians, mulattoes kwaye blacks). abemi Mexico ukuphila ngendlela izixeko, owakhe kwezabo abahlala isithuba. Oku apartment ngu-ncinci kakhulu, kakhulu ngakumbi imimandla composed ngokupheleleyo abucala izindlu. Igosa ulwimi kweli lizwe uthetha-Spanish (Mexico kukuba oyena isispanish-ukuthetha ilizwe ehlabathini), nangona kunjalo, widespread isebenzisa le-isixhosa ulwimi. I-iivenkile kunye restaurants ye-resort kwiindawo kanjalo rhoqo kuva Isifrentshi kwaye isijamani intetho. Kakhulu ngaphantsi asetyenziswa rhoqo dialect ka-yobulali zilandelayo: amaqela. I-foreigner bazazi isispanish, ingakumbi ukuba nguye oza kwenza ishishini kwi-Mexico. Ngoko ke, yena ke ke get kunye Mexican partners, kokukhona impumelelo. Nangona kunjalo, kunye abanye isispanish phrases okanye ziqalekiso kufuneka ulumkele, abahlali babe ndiyawazi oku njengoko disrespectful attitude ye-foreigner. Eyona inkolo kwi-Mexico ngu Christianity, malunga bonke adhere to Catholicism. Ukongeza, phakathi Mexican abemi kukho abameli ka-Protestantism, kuquka Pentecostals kwaye Uyehova ke, amangqina, kwaye malunga le bonke professes enye inkolo. zintathu Mexicans cinga ngokwabo ukuba abe atheists, kwaye malunga nomnye, undecided kunye wecawe. Phakathi abemi beli lizwe waqala makhaya Ibandla kwi Sundays. Nangona impembelelo wecawe, divorces, zasekuhlaleni marriages kwaye illegitimate abantwana asingawo uncommon, nangona hayi kakhulu samkelwe ngumlawuli society. Xa intlanganiso rhoqo sebenzisa intermediary ukwimo mutual umhlobo. Kuba thoroughly ukongeza koku, ngoko ke beka izikhali.
Widely zihanjiswe ishishini amakhadi
Xa ufuna umnxeba asetyenziswa rhoqo amagama eencwadi (señor) kwaye polite pronoun”wena”. Ukuba unxibelelwano phakathi satellites kwenzeka ntoni”wena”njengokuba uthetha ukuba ngamnye ezinye kwaye njengokukhapha. Kuba abafazi kukho iindidi ezimbini nezibheno: a Senhora”watshata umfazi”kwaye yakhe”kubekho inkqubela”. Ukuba somtshato awaziwa ukuba abafazi, polite ukuba jonga wakhe njengoko unobuhle. Umfazi unelungelo silindele phambi kokuba ivula ucango, ukukhanya a cigarette, njl.
njl, kubalulekile iselwa yendalo
I-umbuliso ngu ukwimo uthotho lweempawu zonxibelelwano okanye asazanga kwi cheek. Welcoming umfazi kwi-casual incoko, ngokwenza zombini ngaxeshanye. Vula unxibelelwano kunye rhoqo Pat kwi shoulder, njalo-njalo. ukuba Exude copious izincomo kwi-Mexico sibonwa amaxesha amaninzi irhafu politeness, kwaye uncivil ukuziphatha kungabangela olomeleleyo resentment. Umbulelo iqhele isitsho kwaye overly lengthy. Bukhali denials okanye refusals Mexicans musa ngathi. I-Mexicans, kuya kufuneka kwi-incoko (ngqo kwaye inombolo) ixesha elide ukuxoxa extraneous izihloko phambi proceeding ukuba engundoqo. Alcoholic drinks abahlali kubatshisa kakhulu moderately, ingakumbi kwi-izixeko. Ukuba kuvela kwimo intoxication kwi-wonke ndawo ayikho enqwenelekayo. Nangona kunjalo, Ukutshaya iqhele hayi enomda. Guests kufuneka ukhumbule ukuba Mexican amakhaya abo abasayi kuba kuwo, nokuba imozulu ngaphandle. Rhoqo izipho, kwaye iselwa otyebileyo, kodwa hayi xa sifuna kuqala kuhlangatyezwana nazo. Iintyatyambo njengoko isipho soloko wamkelekile, kodwa bouquet kufuneka enkulu, ubuncinane a dozen iintyatyambo. E-itafile, Mexicans kuziphatha kakhulu civilized, ukuthobela etiquette iimfuno. Ilungelo kokungcamla iwayini unikwa ukuba guests. Toast kungcono ukuba pronounce kwi-Spanish, bekuya kufuneka bust yemikhosi. Ukutya ezifana tortillas okanye tortillas ukutya kunye izandla zenu, bazame ukusebenzisa Cutlery kule meko uthatyathwa i-snobbery
← Kazan reporter: Kazan i kubekho inkqubela balingwe ukuya kuhlangana kunye Mexican journalists kwi emoyeni
Ividiyo i-passionate umdaniso ka-Mexicans, abo yavuthuza phezulu lonke kwi-Intanethi →